FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA POODLE ALIKA ANTONONY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Poodle alika antonony
Zari, Klein Poodle mainty (Moyen Poodle), sary natolotr'i Te-Awa Poodles
'Medium' izao no teny be mpampiasa indrindra amin'ny haben'ny poodle “Klein” na 'Moyen'. Moyen dia midika hoe antonony amin'ny teny frantsay. Klein dia midika hoe kely na mini amin'ny teny alemà. Ny teny Klein dia ampiasaina any Alemana ihany. Moyen no teny frantsay ampiasain'ny FCI Fanciers ankehitriny sy efa tapaka, fa i Moyen taloha dia nampiasain'ny FCI nandritra ny taona maro. Ny karazany Poodle dia antsoina hoe Caniche amin'ny teny frantsay. France dia tanindrazana ho an'ny fianakavian'i Poodle isaky ny FCI (The Fédération Cynologique International, fikambanana an-tsokosoko eraky ny firenena 94). Ny karazana Poodle dia matetika resahina amin'ny teny frantsay amin'ny fisoratana anarana sy fampisehoana FCI. Ity habe antonony ity dia mianjera eo anelanelan'ny Miniature sy ny Standard Poodle, saingy tsy azo amin'ny alàlan'ny fiampitana ny roa fa ny haben'ny karazany Poodle fahefatra any Eropa ary tsy habe vaovao. Ity poodle habe antonony ity dia mahazatra any Etazonia, saingy satria kely izy ireo dia apetraka amin'ny trano fiompiana biby, satria tsy afaka mifaninana amin'ny peratra AKC mifanohitra amin'ilay mpiara-miasa aminy lehibe kokoa, ny Standard. Na izany aza, afaka mifaninana amin'ny sehatry ny fifanarahana UKC izy ireo ary maro no tompon-daka. Ny mpanelanelana dia mazàna ao amin'ny ambaratonga 15-20 santimetatra, ny haben'ny Standard Poodle kely. Eto amin'ny Medium A.S. dia aseho amin'ny kilasy tsy fanatanjahan-tena. Ao amin'ny peratra UKC dia asehon'izy ireo ao amin'ny Gun Dog Group.
Rehefa nokolokoloina mba hampiseho ny fenitry ny alika ny vatana dia natao hanome endrika endrika toradroa. Mitovy halava ny halavany sy ny hahavony amin'ny malazo. Ny karan-doha dia boribory somary somary misy fijanonana voafaritra ihany. Manana vavony lava sy mahitsy izy io. Ny maso maizina sy miendrika boribory boribory somary mifanalavitra ary mainty na volontany. Ny sofina mihantona akaikin'ny loha ary lava sy fisaka. Samy mitovy amin'ny haben'ny alika ny tongony aloha sy ny tongony. Haavo ny topline. Ny rambony dia apetraka ary entina avo. Indraindray dia miantsona hatramin'ny antsasaky ny halavany na latsaka izy mba hahatonga ny alika ho mahay mandanjalanja kokoa. Mety hesorina ny demonia. Ny tongotra miendrika oval dia somary kely ary arifitra ny rantsan-tongotra. Ny palitao dia olioly na kofehy. Izy io dia miaraka amin'ny loko matevina rehetra, ao anatin'izany ny mainty, manga, volafotsy, volondavenona, crème, apricot, mena, fotsy, volontany na cafe-au-lait. Na dia tsy manao ny fenitra fampisehoana an-tsoratra aza ny mpamboly sasany dia miompy Poodles miloko parti. Jereo ny fikolokoloana ireo karazana rakitsary Poodle.
cairn terrier poodle Mix alika kely
Ny Medium dia alika namana manan-tsaina sy falifaly. Azo zarina amin'ny ambaratonga avo izy io, ary tena vonona sy faly mampifaly ny mpitantana azy. Mampihomehy sy marani-tsaina, izy io dia matetika ampiasaina ho toy ny alika sirkus. Arakaraka ny mahahendry ny alika no vao mainka ilana azy ny sainy. Ity karazana ity dia tsy afaka mipetraka any ivelany ao anaty trano kennel. Mila tafiditra ao amin'ny fianakaviana izany. Mety ho avo lenta raha tsy omena ny karazana sahaza sy fanatanjahan-tena mety . Aza avela hivoatra ity alika ity Syndrome kely alika , izay itarika ny alika hino fa alpha amin'ny olombelona izy io. Mety hiteraka ny alika io mora tohina sy mitebiteby , ary tsy dia atokisana loatra amin'ny ankizy sy mety ho olon-tsy fantatra, miaraka amin'ny olana maro hafa momba ny fitondran-tena. hifanerasera tsara ny alikanao. Izy io dia mpiambina tena tsara amin'ny habeny, mahalana vao lasa masiaka. Mety hanomboka hombo be ny mpanelanelana raha tsy misy serasera olombelona amin'ny canine , fitsipika arahana ary ferana ny zavatra avelany hatao. Ny Poodles dia sariaka amin'ny alika hafa ary biby fiompy tsy kaninina . Alao antoka fa mafy orina ity alika ity ianao mpitarika fonosana , mba hialana amin'izay tsy ilaina olan'ny fitondran-tena .
Milatsaka eo anelanelan'ny haben'ny Miniature sy Standard Poodle. Tsy fiovan'ny haben'ny AKC ofisialy, na izany aza, nanjary malaza ivelan'ny Etazonia.
Hahavony: 15 - 20 santimetatra (38 - 50 cm)
Milanja: 20 - 30 pounds (9 - 13 kg)
Ny karazany lava velona, ​​Poodles, na izany aza, iharan'ny aretina génétique maro. Ny katarakta sy ny atin'ny retina miandalana dia mety hiteraka fahajambana. Matetika ny aretin-tsaina sy ny hoditra - mety noho ny fampiasana tsy fahaizana clip na alergie amin'ny shampoo sy / na fanamafisana ny lokony. Matetika koa ny aretin'ny maso sy ny sofina. Izy ireo koa dia mora voan'ny PRA, diabeta, voan'ny androbe ary aretim-po. Brown Poodles dia mazàna lasa volondavenona aloha. IMHA (Anemia Hemolytic Mediated Immune).
Ny Medium Poodle dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Raha omena fanatanjahan-tena ampy dia tsy mihetsika an-trano izy io. Handry eo akaikinao io ary ho mahasalama kokoa rehefa ao an-trano, na dia milalao any ivelany aza izy ary karazan-tsaina tena mahay, noho izany dia tiany ny hetsika be eritreritra handrisihana ny toe-tsainy. Ity karazana ity dia handeha tsara raha tsy misy tokontany.
Medium Poodles mila a mandeha isan'andro . Rehefa eny am-pandehanana ianao dia alao antoka fa ny alika dia miakatra eo an-toeran'izay na ao aoriany ilay mitazona ny firaka, tsy eo alohany mihitsy, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia mila ny olombelona. Toy ny karazana rehetra, ny lalao dia tsy hahatanteraka ny toetrany voalohany handehanana. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra malalaka azo antoka tsy hitarika, toy ny tokotany malalaka sy mimanda. Mankafy ny fotoana filalaovana amin'ny rano sy ny fitiavana izy ireo. Izy ireo dia karazany iray be dia be miaraka am-piandohana fihazana sy famerenana, na dia miavaka amin'ny hetsika fampisehoana atolotray azy ireo aza ianao: ny hakingana, ny fankatoavana, ny fihetsiketsehana, ny fampisehoana fampifanarahana, ary matetika ny iray dia handao peratra iray ary handeha mivantana amin'ny iray hafa hifaninana indray. Satria tia rano izy ireo dia alika mitsorika dock be ary tia manangona rano.
Alika kely 3 ka hatramin'ny 4 eo ho eo
Ny paoma dia tsy maintsy soloana matetika ary hokapaina isaky ny enina ka hatramin'ny valo herinandro. Diovina ary zahao matetika ny sofina raha misy savoka na kongona na aretina ary esory ny volo maniry ao anaty lakandranon-tsofina. Mila mizana mizana matetika ny nify. Satria tsy raraka ny palitao dia tokony hokopahina. Misy karazany maro ny clip poodle. Ny mahazatra indrindra ho an'ny tompona biby dia ny clip fikarakarana mora antsoina hoe 'pet clip,' 'puppy clip' na 'lamb clip', izay tapaka fohy ny palitao manerana ny vatana. Ny sarimihetsika malaza dia ny lasely anglisy sy ny clip Continental, izay aharatra ny antsasaky ny vatan'ny olona, ​​tavela manodidina ny kitrokely ny bracelet, ary tavela eo amin'ny rambony sy ny valahany ny pom-poms. Ny fenitra AKC dia mamela alika latsaky ny herintaona haseho amin'ny saribakoly alika fampisehoana izay manana fepetra manokana toy ny pom-pom amin'ny faran'ny rambony. Ny fomba fanaovana clip hafa dia ny clip kontinanta nohavaozina, clip an-tanàna sy ambanivohitra, clip kennel na utility, clip fahavaratra, ary clip Miami of bikini. Poodles nandatsaka kely tsy misy volo ary tsara ho an'ny marary allergy .
Ny Poodle dia fantatra manerana an'i Eropa Andrefana nandritra ny 400 taona farafahakeliny ary naseho tamin'ny sary hosodoko tamin'ny taonjato faha-15 sy ireo sary nalaina tamin'ny taonjato voalohany. Mampiady hevitra ny lohahevitra momba ny toerana namelarana ny alika tamin'ny fomba ofisialy ary tsy misy olona tena mahalala ny fiaviany marina. Frantsa dia nitaky ny niaviany, saingy ny AKC dia manome ny voninahitra ho an'ny Alemanina, izay nilazan'izy ireo fa alika mpamaky rano. Ny fanambarana hafa dia i Danemark, na Piedmont taloha. Ny azo antoka dia taranaky ny ankehitriny ny alika lany tamingana Alika amin'ny rano frantsay, ny barety ary ny Hound Water Hungarian. Ny anarana hoe 'Poodle' dia azo inoana fa avy amin'ny teny alemaina 'Pudel,' izay midika hoe 'izay milalao anaty rano.' Ny 'Poodle clip' dia noforonin'ireo mpihaza mba hanampiana ny alika milomano tsara kokoa. Navelan'izy ireo hiaraka amin'ny volotara ny hatsiaka sy ny bararata maranitra. Ireo mpihaza any Alemana sy Frantsa dia nampiasa ny Poodle ho alika basy ary ho toy ny vorona riandrano ary hamofona truffle mihohoka ambanin'ny tany anaty ala. Nanomboka nampiasa ny karazany ny Frantsay ho mpanao dihy noho ny fahakingan'ilay alika sy ny fahaizany mampianatra. Nanjary nalaza be tany Frantsa io karazana io, izay nanjary nantsoina hoe 'French Poodle', saingy nantsoin'ny vahoaka frantsay hoe 'Caniche', izay midika hoe alika gana. ” ny Kilalao SY Poodle kely ny karazany dia nalaina avy tamin'ny alika lehibe kokoa, ankehitriny fantatra amin'ny anarana hoe Poodles mahazatra . Tamin'ny taonjato faha-18 dia nanjary ankafizin'ny mpanjaka ny poodles kely kokoa. Ny habe ofisialy telo dia ny Toy, Miniature ary Standard Poodle. Heverina ho iray karazana izy ireo ary tsaraina amin'ny fenitra an-tsoratra ihany fa amin'ny habe hafa takiana. Ireo mpiompy koa dia miteraka habe eo anelanelan'ny antsoina hoe Medium Poodle, indraindray antsoina hoe Klein Poodle (Moyen Poodle) ary kely kokoa teacup Poodle . Ny sasany amin'ireo talentan'i Poodle dia misy: retrie, mailaka, mpiambina, fankatoavana mifaninana ary fanaovana hafetsena.
Beethoven, Klein Poodle mainty (Moyen Poodle), sary natolotr'i Te-Awa Poodles
Casey Dixon, Klein Poodle mainty (Moyen Poodle), sary natolotr'i Te-Awa Poodles
Mia, Klein Poodle fotsy (Moyen Poodle) fotsy, sary natolotry ny Te-Awa Poodles
alaskan malamute amboadia Mix alika kely amidy
Ankizy Moyen Poodle miloko miloko, sary natolotry ny Mountain Summit Dogs
Puppy Klein Poodle miloko Parti, sary nahazoana alàlana avy tamin'ny Mountain Summit Dogs
Xiver the Klein Poodle. Eo anelanelan'ny habe kely sy mahazatra izy.
Karazana Poodle tsy - AKC
Alika Poodle - Sarivongana Vintage azo angonina
alika fohy volo mainty
pitbull mpanao ady totohondry Mix alika sary
Rosiana terrier kilalao lava volo
voromahery afangaro amin'ny alika wiener
pyrenees mahafinaritra st bernard mix